I-WordPress: Ungayilayisha kanjani futhi uyishumeke i-PDF | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 7, 2019 NgoMsombuluko, Januwari 7, 2019 Douglas Karr
Umkhuba oqhubeka ukhula namakhasimende ami ubeka izinsiza kusayithi labo ngaphandle kokuphoqa ithemba lokubhalisa ukuzilanda. Ama-PDF ngqo - kufaka phakathi amaphepha amhlophe, ama-case studies, amacala wokusebenzisa, izinkombandlela, njll. Iklayenti lakamuva esisanda kwethula inkampani ye-SaaS enikezela ukuzenzakalela kwerobhothi okuhlakaniphile, Sula iSoftware.
Isayithi labo elidala lalinezinkinobho zokulanda izivakashi ezingazichofoza ezizolanda ngokushesha futhi zivule i-PDF. Vele, bebengahle bahlele izinkinobho zokulanda ngomkhondo wokulandela umcimbi bese bebona imiphumela… kepha inkinga ukuthi basebenza kunqwaba yezingcezu zokuqukethwe futhi kungadinga isikhathi esingeziwe ukufaka ikhodi ekhasini elithile lengqikithi noma ukungeza ukumakwa komcimbi okudingekayo kunkinobho ngayinye yokulanda.
Impendulo ilula kakhulu. Uma sifaka i-PDF kusifundi se-PDF, singalandelela ukubukwa kwamakhasi njenganoma iliphi elinye ikhasi ngaphakathi kweGoogle Analytics. Uma ufaka ifayela le- Ukushumeka Kwe-PDF nge-WordPress, ungakwenza lokho. Ngempela sinesibonelo ku- uhlu lokuhlola lomkhankaso wokumaketha. Nakhu ukuthi kubukeka kanjani ngaphakathi kwekhasi:
DK New Media Ishidi Lokusebenzela Lokumaketha
Empeleni kukhona umndeni wama-plugins onikezela ngezici ezimbalwa:
Isici esiphephile esikhubaza ukulanda.
Ukuhambisa i-pagination nenkinobho yokulanda ozikhethela phezulu noma phansi kwe-PDF.
Kuboniswa imenyu ye-PDF ku-hover noma ebonakalayo ngaso sonke isikhathi
Inkinobho yesikrini esigcwele.
I-plugin ye-thumbnail ye-PDF.
Ukubuka nokulanda okuphendulayo kweselula.
Izixhumanisi ezisebenzayo ngaphakathi kwe-PDF.
Akunasidingo sokufaka ikhodi kunoma yini, lapho ushumeka i-PDF, ikhombisa ngokuzenzakalela ngaphakathi kwe- ikhodi emfushane!
Ngisebenzise le plugin kumasayithi amaningi futhi isebenza ngokungenaphutha. Ukulayisense kwabo kuhlala njalo, ngakho-ke ngithenge ilayisensi ephelele engivumela ukuthi ngiyisebenzise kumasayithi amaningi ngendlela engifuna ngayo. Ku- $ 50, lokho kuhle kakhulu.
Ukushumeka kwe-PDF kweWordPress
Akusona isixhumanisi esixhasiwe noma sokusebenzisana. Bengifuna nje ukukhuthaza ithuluzi elihle leWordPress!
Tags: adobeindlelafaka i-pdfPDFWordPress
Jan 3, 2011 ku-3: 40 AM
@dknewmedia Ngiyabonga ngendatshana yakho yokuthi ungayifaka kanjani iPDF! Kulula ukulandela, kusebenza njengentelezi, futhi okuhle kunakho konke, kusizile ukuxazulula inkinga. Qina! Qhubeka nokuthunyelwe okuhle.